Vaovao - Fametrahana milina extrusion PTFE plastika - Raharaha fahombiazana
PTFE Plastic Tube Ram Extruder dia soloina solosaina tanteraka ary mora azo. Ny hetsika tena hain'ny mpampiasa dia tsy mitsitsy vola sy fotoana mandritra ny fanodinana fa manome antoka ny fiarovana ny mpiasa.
SUNKOO Machine Tech Co., Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana fikarohana, fanamboarana ary fivarotana fitaovana PTFE & UHMWPE ho iray amin'ireo orinasa maoderina. Ary amin'ny maha-mpanamboatra lehibe indrindra an'ity sehatra ity, ny SUNKOO dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa tsara amin'ireo orinasa an-trano sy avy any ivelany mandritra ny taona maro miaraka amin'ny kalitaon'ny kilasy voalohany, ny haitao ambony ary ny serivisy feno. Ny injenieranay zokiny dia nitsidika an'i Etazonia mba hanampy ny mpanjifa any hametraka, hanao komisiona ary hanome fiofanana momba ny asa sy fikojakojana.
PTFE Tube Ram Extruder, ny fitaovana izay hamboarina, no vokatra fototra an'ny SUNKOO. Namboarina mandroso, afaka mitazona ny hafainganam-pandehan'ny ondrilahy ary mamokatra vokatra PTFE Tube avo lenta miaraka amin'ny haitao tany am-boalohany. Ny milina dia mety ho an'ny fitaovana PTFE vaovao ary ny iray namboarina. Ankoatr'izay, ny savaivony marobe dia afaka manome fahafaham-po ny fangatahana manokana an'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny tombony amin'ny fivoahana avo lenta sy ny fanjifana angovo ambany dia nanokatra ny tsenany ho an'ny USA, UAE, Korea, India, Russia, Malaysia, sns ny SUNKOO ary nahazo laza tsara teo amin'ny mpanjifa.
Fotoana fandefasana: Mey-24-2020